नेपाली र अमेरिकन संस्था बिच समन्वय गर्नेछु– अम्बिका लोहनी – Durbin Nepal News
साउन २६, २०७८ ३:३० मा प्रकाशित
अमेरिकामा ३० वर्षअघि स्थापना भएको नेपलिज एसोसिएसन इन साउथ इष्ट अमेरिका (नासा) यति बेला चुनावी सरगर्मीले तातेको छ । दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको साझा एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यस संस्थामा पहिलो पटक “महिलाले नेतृत्व” गर्ने सम्भावना बढेको छ । नासाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेकी अम्बिका लोहनीले आगामी सेप्टेम्बर ५ मा हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् । सन् २०१३ देखि नासामा संलग्न रहेकी लोहनीले यसअघि उपाध्यक्ष, सह-सचिव र कोषाध्यक्ष भएर कार्य सम्पादन गरिसकेकी छन् । सूचना प्रविधि, जनसंपर्क लगायतका विगतमा संस्थाले गरेको कार्यक्रम र सम्पन्न भएका महाधिवेशनलाई सफल बनाउन भूमिका खेलेकी छन् । यसै सन्दर्भमा दूरबिन नेपालले लोहनीसँग उनको उम्मेदवारी भावी योजना र कार्यान्वयन लगायतका विषयमा गरिएको छोटो कुराकानीः
दूरबिन: यहाँले नासाको आसन्न अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, के के एजेन्डा अघि सार्नुभएको छ ?
लोहनी: पहिलो कुरा त यस ऐतिहासिक संस्थामा पहिलोपटक महिलाले नेतृत्व तहमा पुग्ने प्रयास गर्दैछ । अर्को कुरा म लामो समयदेखि यस संस्थाको कार्यकारिणी पदमा संलग्न रही कार्य गर्दै आएकी छु । हाल म वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुँ यस अर्थमा पनि म स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको हकदार हुँ । तर वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले मात्र नभई म निदृष्ट लक्ष्य, योजना र कार्य तालिका बनाएर अघि बढ्ने छु । यस संस्थालाई हामी सबैको “साझा र “हितोपकारी” बनाउने मेरो लक्ष्य हो ।
दूरबिन: महिला नेतृत्वमा पुग्नु सकारात्मक हो तर अमेरिकामा रहेका नेपाली संस्थाहरू “चुनावमुखी” र “प्रचारमुखी” बढी देखिन्छन् प्रायः । कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
लोहनी: मैले महिला भएर मात्र नेतृत्वको दाबी गरेकी छैन, मैले विगतमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गरे पुग्छ । सहसचिव, कोषाध्यक्षदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्मको मेरो कार्य क्षमता र समुदायप्रति मेरो समर्पणलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन मेरो अनुरोध छ । मैले यस संस्थालाई प्रचारमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी बनाउने योजना बनाएकी छु । “एकेडेमिक” क्षेत्रका नेपालीहरूलाई संस्थामा जोड्ने प्रयास गर्नेछु । महिलाहरूलाई समुदाय र नेतृत्वसँग जोड्ने माध्यमको रूपमा कार्य गर्नेछु । मरो अर्को योजना भनेको अमेरिकी सङ्घसंस्था र नेपाली संघ सस्थाबीच आपसी सहकार्य र समन्वय गराउने हो । वास्तवमा हामीले राज्यका धेरै सुविधाहरू लिन सकेका छैनौँ किनभने हामीले “एप्रोच” गर्न सकेका छैनौ । जनगणना मा संलग्न भएर काम गरेपछि मलाई त्यसको अनुभूति भएको छ । हामीले धेरै क्षेत्रमा अमेरिकी संघ संस्थासँग मिलेर नेपाली समुदायको हितमा काम गर्न सक्छौँ ।
दूरबिन : तपाईँले अध्यक्ष बाहेकको कार्यकारिणी पदमा संलग्न रही काम गरिसक्नु भएको छ । मैले सोधेको चाहिँ अध्यक्ष भएर थप के बढी गर्नु हुन्छ ?
लोहनी: मैले तपाईँलाई भने नि, नेतृत्व तहमा रहेर धेरै काम गर्न सकिन्छ । एक त आफ्नो “भिजन” र “मिसन” बमोजिम काम गर्नु हो । दोस्रो कुरा कतिपय अवस्थामा नेतृत्व तहबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले निर्वाचन जितेमा मैले यो संस्थामा महिला, प्रोफेसनल र यूथहरूको एउटा प्रभावकारी टिम बनाउने छु । अवश्य पनि मेरो अनुभवले पनि त्यही भन्छ । यहाँ रहेका स्टेट लेबलका, सिटी र काउन्टी लेबलका सङ्घसंस्था मिलेर काम गर्न सकिन्छ । यसबाट हाम्रो समुदायले फाइदा पाउँछ । हामी एकजुट भएमा उनीहरूले हाम्रो समुदायमा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउँछन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ हामीलाई हुन्छ ।